URío Segura: izici, isimo sezulu, izimbali nezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngomunye wemifula ebaluleke kakhulu eSpain. Imayelana ne- umfula uSegura. Itholakala eningizimu-mpumalanga yeSpain futhi ingenye yemithombo ebaluleke kakhulu ye-hydrographic eYurophu. Ukunwetshwa kwayo kungamakhilomitha angama-325 kanti umcengezi wawo uhlanganisa indawo engamakhilomitha-skwele ayi-14.936. Ekugcineni, ngemuva kokuhamba izifundazwe ezi-4, umlomo wayo useLwandle iMedithera.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana noMfula iSegura nezimpawu zawo.
2 Isimo sezulu somfula iSegura
3 Izimbali nezilwane zomfula iSegura
Yize kungelinye lamabheshi amancane kakhulu kulo lonke elaseSpain, ireferensi iyathathwa ngenxa yobude bayo. Ungomunye wemifula esetshenziswa kakhulu ukusiza abahlali bezindawo ogeleza kuzo. Futhi kuyindlela yokubheka izivakashi naphezu kokuthambekela abanakho ngenxa yezikhukhula. I-morphology yendawo isho ukuthi lapho imvula eningi iwela isikhashana, indlela yomfula ingadala izikhukhula.
Lonke lolu bheshi ikakhulukazi lunezinhlobo ezahlukahlukene zemibuso yokudla imifula. Ngakolunye uhlangothi, sinentela ekhanda kanye nenye kuningi lokunwetshwa kwayo. Ngenxa yokuthi indawo yomthombo wayo iphakeme impela, kuvunyelwe ukuthola amanzi ancibilikayo avela eSierra de Segura ngenkathi yasentwasahlobo. Amanzi aqhamuka kulo ncibilikile asenele ukondla umbhede womfula.
Eminye imizila ingeyeMbuso waseMedithera ogelezayo. Lokho wukuthi, kubonakala kakhulu ngokuba ne- uzamcolo omkhulu phakathi kwekwindla nobusika kanye nokwehla kwentwasahlobo nehlobo. Iqiniso lalokhu kwehla osebeni lomfula ngezikhathi ezishisayo zonyaka liba imbangela yokukhathazeka kubahlali abathembele kulo.
Esinye sezici uMfula iSegura ogqame ngaso ngamanzi aso acwebezelayo. Ngaphezu kwakho konke, itholakala endaweni engxenyeni engenhla yokuqala kwengxenye yayo ephakathi. Kulezi zindawo Amanzi angamakristalu ngokuphelele njengoba engangcolisiwe nganoma yimuphi umenzeli wangaphandle. Kancane kancane bathola ithoni eluhlaza okwesibhakabhaka futhi ngiyenza umbala oluhlaza okomhlaba. Lokhu ikakhulukazi kungenxa yezici ezahlukahlukene njengokushintshwa kwendawo nokungcola.
Ukusakaza kufinyelela kububanzi bawo obukhulu esigabeni esiphakathi. Kulapha lapho isetshenziswa khona kakhulu yizindawo eziseduze. Enye yezindawo ezisizakala kakhulu ngomfula iSegura yiMurcia. Kodwa-ke, futhi kuyiphuzu lapho kunengozi enkulu yesomiso. Ukujula okumaphakathi kungamamitha angama-70 uma ingekho ngenkathi eyomile
Isimo sezulu somfula iSegura
Kuyo yonke indawo lapho kugeleza khona umfula iSegura, kanye nombuso wawo oguqukayo, kuncike ekuklanyweni. Isibonelo, sikubona lokho kunhlokweni, ekubeni ku- ukuphakama kwamamitha ayi-1.413 ngaphezu kogu lolwandle amazinga okushisa athe xaxa aqoshwe phansi. Kodwa-ke, la mazinga ngokwesilinganiso afinyelela kuma-degree angama-28 ngenkathi eshisayo. Esikhathini esibandayo sonyaka wonke kuvame ukufika kuma-degree ayi-13.
Njengoba ukuphakama kwehla kuze kufike ogwini, izinga lokushisa liyanda. Endaweni lapho igeleza khona kune-average engu-18 degrees ngonyaka. Izinyanga ezibandayo kakhulu ziphakathi kukaDisemba noJanuwari, kanti ezinyanga ezifudumele kakhulu nguJulayi no-Agasti. Mayelana nemvula, iphethini lemvula likhulu endaweni enezintaba. Njengoba sifinyelela ezindaweni eziphakeme kakhulu sinamanani aphezulu emvula. Enhlokweni nasendaweni emaphakathi sinamanani we-1.000 mm ngonyaka. Ngakolunye uhlangothi, lapho sifika endaweni yomlomo, sibona ukuthi ngokwesilinganiso sine-300 mm kuphela ngonyaka.
Ezindaweni ezingasogwini eduze nomlomo wayo sinendawo eyomile. Ezokuvakasha nazo zincike esimweni sezulu. Ingxenye yomfula iSegura onemisebenzi yabavakashi enesidingo esikhulu igxilwe engxenyeni engenhla naphakathi ngoba iheha ngokwengeziwe ezingeni lemvelo. Iqiniso lokuthi amanzi asephenduke waba yi-crystal clear liheha inani elikhulu lezivakashi ezihamba emizileni yokuhamba izintaba. Ngaphezu kwalokho, yizindawo lapho kunokugeleza okuphezulu kakhulu. Ezindaweni eziphakemeyo kwenziwa izintaba nokuhamba ngebhayisikili ezintabeni. Umthombo wayo useSierras de Cazorla, eSegura y Las Villas Natural Park. Le ndawo ifuneka kakhulu cishe kuzo zonke izikhathi zonyaka.
Ezindaweni lapho kunokugeleza okuphezulu ungakwazi khona i-kayak ne-raft kuma-rapids. Ukuba yindawo yomfula enokuhlanzeka okuphezulu emanzini, ungageza kuyo futhi kunesiko lokuphuza emthonjeni okungumthombo uqobo lwawo. Onke amadolobha anqamula lo mfula ayathandeka kubavakashi abafuna ukuhlola ukwazi okwenzeka endaweni yasemakhaya.
Izimbali nezilwane zomfula iSegura
Njengoba babewumfula ogeleza endaweni evikelekile yemvelo, uyikhaya lokuhlukahluka okuningi ngokwezimila nezilwane. Yize inciphile ngenxa yabantu kanye nemithelela kwezemvelo, inani elikhulu lezinhlobo zezitshalo lisekhona. Kumele futhi kubhekwe ukuthi imisebenzi yabantu efana nezolimo idala imithelela ethile ezitshalweni zemvelo.
Izimbali zihlukaniswe ngokwesikhathi esitholakala ngaso. Ngenxa yezimo zezulu ezahlukahlukene esizithola kuwo wonke umfula, sinezimbali eziningi ezahlukahlukene. Bayatholana amahlathi ompayini, ama-daffodils, ama-geraniums, asebenzayo nokude avikelekile ngenxa yobuningi bawo obutholakalayo. Esinye sezitshalo esikhanga kakhulu isitshalo esidla inyama esaziwa ngePinguicula Vallisneriifolia.
Ngaphambi kokufika endaweni yaseMurcia sithola amanye amahlathi agcwele iminyezane, poplar kanye nezihlahla ze-elm. Kukhona nohlaza oluphakathi noluphansi olwakhiwe imibhede yomhlanga, imibhede yomhlanga nemibhede yomhlanga. Ngokuqondene nezilwane, kunemindeni ehlukene ikakhulukazi esatshalaliswa phakathi kwezilwane ezincelisayo, izinyoni nezilwane ezihuquzelayo ezisengozini yokuqothulwa. Phakathi kwezinyoni ezisengcupheni yokushabalala sithola iKingfisher. Ngokuphathelene nenhlanzi, kukhona ubukhona obukhulu be-trout ejwayelekile kanye ne-rainbow trout. Noma kunjalo, lesi sakamuva sinciphise inani labantu bakudala.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngoMfula iSegura nezimpawu zawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Umfula iSegura
Ukushisa okuqondile kwamanzi